बालुवाटार प्रकरणमा विष्णु पौडेल दोषी छैनन् : प्रम ओली
काठमाडौं, १७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो वर्षमा सुरुवातको आधार निर्माण गरेकाले समृद्धिले गति लिन नसकेको बताएका छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा नेकपा संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अब समृद्धिमा अघि बढ्ने दाबी गरे। बालुवाटार जग्गा किनबेच प्रकरणमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी ओलीले भने पौडेलको..
सरकारविरुद्ध नेविसंघसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनको प्रदर्शन
काठमाडौं, १७ वैशाख । राजनीति दलहरु सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा ११ विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले शिक्षा क्षेत्रको शुल्क वृद्धि घटाएर माध्यामिक तहको निःशुल्क शिक्षा व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, देशमा वृद्धि भएको हत्या हिंसा नियन्त्रण तथा अन्त्य गर्नुपर्ने, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाइ कारबाही गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु राखी प्रदर्शन..
राष्ट्रपति भण्डारी ल्हासामा, उपाध्यक्ष चियाङ जीद्वारा स्वागत
ल्हासा , १७ वैशाख राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङको निमन्त्रणामा चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा आज बेइजिङबाट ल्हासा आइपुग्नुभएको छ । उहाँलाई ल्हासाको गोङ्गर विमानस्थलमा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका कार्यकारी उपाध्यक्ष चियाङ जीले स्वागत गर्नुभयो । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी बेइजिङमा आयोजना भएको दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन (अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका लागि दोस्रो क्षेत्र तथा मार्ग मञ्च) मा सहभागी भई..
नेपाल गभर्नरको रुपमा अर्थमन्त्री खतिवडा फिजी प्रस्थान
काठमाडौँ, १७ बैशाख । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा एसियाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको ५२औं वार्षिक बैठकमा भाग लिन मंगलबार फिजीतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । आगामी मे ०२–०५ सम्म फिजीको नादीमा आयोजना हुने बैठकमा मन्त्री खतिवडाले नेपालको गभर्नरको रुपमा वार्षिक बैठकका विषयसूचीमा धारणा राख्न त्यसतर्फ गएका हुन् । अर्थमन्त्रीका सचिवालयका अनुसार बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष तथा दक्षिण एसियाका महानिर्देशक, युरोपियन..
काठमाडौँ, १७ वैशाख । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहलाई रिक्त पदपूर्तिका लागि मागबमोजिम विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । रिक्त पदपूर्तिका लागि सबै स्थानीय तहलाई अपुग कर्मचारीको विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत किरण थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै स्थानीय तहलाई यही वैशाख २० गतेभित्र रिक्त पदपूर्तिका लागि माग आकृति फाराम भरी पठाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।..
प्रदेश २ मा आफ्नो सरकार बनाउने प्रचण्डको संकेत, सिंगो पार्टी नेकपामा समाहित
ललितपुर, १७ वैशाख । अमर यादव नेतृत्वको मधेश तराई फोरम नेपाल नेकपामा समाहित भएको छ । मधेश तराई फोरम नेपाल तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबाट अलग भएको थियो । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत यादव नेतृत्वको सिंगो पार्टी नेकपामा समाहित भएको घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले संविधान गतिशील दस्तावेज भएको बताए । उनले भने, ‘संविधान जनताको माग अनुसार आवश्यकता अनुसार..
लहान, १७ वैशाख । सङ्घीय समाजवादी फोरम प्रदेश नं २ को अध्यक्षमा विजय यादव निर्वाचित हुनुभएको छ । फोरम प्रदेश नं २ को कार्यसमितिका लागि भएको मतदानमा फोरमका उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री रेणु यादवलाई ३७ मतान्तरले पराजित गर्दै फोरमको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहनुभएका यादव निर्वाचित हुनुभएको हो । गए राति सम्पन्न मतगणना परिणामअनुसार विजय यादवले..
घटना भएको साढे १२ वर्षपछि ३ फरार अभियुक्त पक्राउ
धादिङ, १७ बैशाख । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका तीन जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले साढे १२ वर्षपछि पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ । उत्तरी धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिका–२ कामीगाउँका २७ वर्षीय देवबहादुर विकलाई देउसी खेल्न जान नमानेको आरोपमा कुटपिट गरी विसं २०६३ कात्तिक ७ गते सोही ठाउँका आठ जनाले हत्या गरेका थिए । हत्यापछि शवसमेत गुपचुप राख्न जलाइएको थियो । घटनापछि मृतकका भाइ..
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : माधव नेपालले दिए स्पष्टीकरण
काठमाडौं, १७ वैशाख नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तार गर्ने निर्णय आफ्नो भएको भन्दै उनले त्यसको जिम्मा आफूले लिने बताए । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको विषयमा नेपाल नेता नेपाल पनि मुछिएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला ३१ वैशाख २०६७ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले डिल्लीबजार मालपोलले गरेको गलत निर्णयलाई बैधानिकता दिएको..
राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण फलदायी, नेपालको प्राथमिकता 'BRI' [फोटोसहित]
बेइजिङ, १६ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच सोमबार ग्रेट हल अफ द पिपलमा द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । निकै लामो प्रतिक्षापछि चीनले नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बेइजिङमा रातो कार्पेट ओछ्याएको छ। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चुनिने बित्तिकै दक्षिणी छिमेकी भारतले भ्रमणका लागि निम्त्याउने गरेपनि चीनले अहिलेसम्म हतार गरेको थिएन । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक पार..
पेचिलो बन्दै सामाजिक सुरक्षा, रोजगारदाताको सहभागिता न्यून
काठमाडौँ, १६ वैशाख । जोखिममा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक वर्गको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने शुरुवातदेखि नै जटिलता देखिएको छ । गत मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरिएको थियो । सरकारले..
नेपाल चीनबीच विभिन्न महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर
बेइजिङ, १६ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा उहाँका चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच सोमबार ग्रेट हल अफ द पिपलमा द्विपक्षीय बैठकपछि उहाँहरुको उपस्थितिमा नेपाल तथा चीनबीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । पहिलो हस्ताक्षर पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयनको सहमतिमा भएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट पराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली तथा चीनका यातायातमन्त्री ली सियाओपेङले हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यस्तै चिनियाँ सहयोगमा बनेका विद्यमान परियोजनाका मर्मत..
बजेट अधिवेशन शुरु : प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस र सरकारबीच जुहारी
काठमाडौँ, १६ वैशाख । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरुले राष्ट्रियसभामा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनेर सभाको गरिमा र छविलाई उच्च एवं सम्मानित बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले राजनीतिक शक्तिहरुले यतिखेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम प्रयोग गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियसभामा विगत झैँ सत्ता र प्रतिपक्ष नभनेर सभाको गरिमा र छविलाई उच्च..
सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ : नेताद्वारा शुभकामना
काठमाडौँ, १६ वैशाख प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले जनताको हितका कुनै काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचर बढेको, शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्केको तथा हत्याहिंसाको घटनामा संलग्न दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सभापति देउवाले बारा र पर्सालगायत तराईमा आएको हावाहुरीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएकामा दुःख..
बारा–पर्साबाट सेना फिर्ता गर्न राजपाको माग, स्थानीय तह पहिलो रोजाई !
काठमाडौँ, १६ वैशाख राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बारा र पर्सामा हावाहुरी पीडितलाई घर बनाउने काम सेनाबाट फिर्ता लिन माग गरेको छ । सरकारले सेनालाई घर बनाउने जिम्मा दिँदै बजेट समेत दिइसकेको छ । तर राजपाका नेता अनिल झाले संसद बैठकमार्फत् उक्त कार्य सेनाबाट फिर्ता लिएर प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई दिन माग गरेका हुन् । ‘घर बनाउने कुरा भयो । हावाहुरी पीडितलाई घर बनाउन..
क्याप्टेन विजय लामा वायुसेवा निगमको प्रवक्ताबाट हटाइए
काठमाडौं, १६ वैशाख नेपाल वायुसेवा निगमका क्याप्टेन विजय लामा प्रवक्ता पदबाट पदमुक्त भएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उनलाई प्रवक्ताबाट नहटाएसम्म लाइसेन्स निलम्बन गरेको जानकारीसहितको पत्र प्राप्त निगमले उनलाई पदमुक्त गरेको हो । वायुसेवा निगमको बोर्डिङ भएको जहाजलाई उड्न नदिएको विषयलाई लिएर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका लामा कारवाहीमा परेका हुन् । उनलाई केही दिन अघि विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, उनको..
राष्ट्रपति भण्डारीसँग लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी जापानका उपप्रमुखको भेटवार्ता
बेइजिङ, १६ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सोमबार बिहान जापानको सत्ताधारी लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ जापानका उपप्रमुख तोशिहिरो निकाइको नेतृत्वमा सांसदहरुको एक समूहले भेटवार्ता गर्यो । उक्त अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले जापान नेपालको असल र नजिकको मित्र भएको र नेपालको विकास परियोजनामा सबैभन्दा ठूलो सहयोगी भएको बताउनुभयो । उहाँले जापान सरकारबाट भएका काम राम्रा र स्तरीय भएको भनी प्रशंसा गर्नुभयो । उपप्रमुख तोशिहिरो निकाइले..
विप्लव समूहका क्षेत्रीय इञ्जार्च 'शक्ति' बाँसगढीबाट पक्राउ
धम्बोजी, १६ वैशाख : बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिकाबाट नेत्रविक्रम चन्द समूहका क्षेत्रीय इञ्जार्च शक्ति भनिने विष्णु परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बाँसगढी र ठाकुरबाबा नगरपालिका क्षेत्रका इञ्चार्ज परियारलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुवाङले जानकारी दिनुभयो । चन्दा सङ्कलन गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ । ..
सिके राउत निर्वाचन आयोगमा, दल दर्ताका लागि दिए निवेदन
काठमाडौ, १६ वैशाख जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पार्टी दार्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । अध्यक्ष राउतसहित ३५ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको दल दर्ताका लागि आईतबार निवेदन दर्ता गराइएको सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रन सिंहले बताए । सो पार्टीले चुनाव चिन्ह अष्टदल प्रस्ताव गरेको छ, भने रातो र हरियाको बीचमा सेतो रंग राखिएको चारकुने झण्डा रहेको छ । यद्यपि, चुनाव..
जीतपुर, १५ वैशाख । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले पार्टीको तत्काल महाधिवेशन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका–४ जीतपुरमा भएको कार्यक्रममा उहाँले काङ्ग्रेस केन्द्र र प्रदेश कहीँ पनि सत्तामा नरहेकाले महाधिवेशन गरेर अगाडि बढनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति कपिलवस्तुद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेता कोइरालाले सरकार असफल भएको अरोप लगाउनुभयो । काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अत्तहर कमाल मुसलवान,..
Results 9831: You are at page 161 of 328